Izifundo ze-ETABS -Geofumadas
Kule khosi ye-AulaGEO, ibonisa indlela yokulungisa iprojekthi yezindlu zangempela kunye neendonga zesakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike ekubaleni kwesakhiwo. Isoftware ye-ETABS 17.0.1. Yonke into edibene ne...
Le yikhosi ebandakanya uphuhliso oluphambili lwethiyori kunye neprakhtikhali ye-Structural Masonry Walls. Yonke into enxulumene nemimiselo iya kuchazwa ngokweenkcukacha: Imigaqo yoYilo kunye noLwakhiwo lweZakhiwo kwi-Structural Masonry R-027. Kule…
Ngesi sifundo uya kukwazi ukuphuhlisa iprojekthi yezindlu yokwenyani kunye ne-Structural Masonry Walls, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike kwi-ETABS 17.0.1 i-software yokubala i-structural calculation.Yonke into enxulumene nemimiselo ichazwe ngokweenkcukacha:...
Ngale khosi uya kukwazi ukulungiselela iprojekthi yezindlu zangempela kunye neendonga zesakhiwo, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike ekubaleni kwesakhiwo. I-ETABS 17.0.1 Isoftware Yonke into enxulumene nemigaqo icaciswa ngokweenkcukacha: Imigaqo ye...
Kule khosi uya kukwazi ukuphuhlisa iprojekthi yezindlu zangempela kunye ne-Structural Masonry Walls, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike kwi-ETABS 17.0.1 i-software yokubala i-structural calculation. Yonke into enxulumene nemigaqo ichaziwe: Imithetho yoyilo…
Ngale khosi uya kukwazi ukuphuhlisa iprojekthi yezindlu yokwenyani kunye ne-Structural Masonry Walls, usebenzisa esona sixhobo sinamandla kwimarike ekubaleni kolwakhiwo. I-ETABS 17.0.1 Isoftware Yonke into enxulumene nemigaqo icaciswa ngokweenkcukacha: Ulawulo lwe...
I-AulaGEO inikezela esi sifundo ukuze isebenze kwiprojekthi yezindlu yokwenyani eneNdonga zeMasonry yeStructural, isebenzisa esona sixhobo sinamandla kwintengiso kwi-ETABS 3 yesoftware yokubala yesakhiwo. Yonke into enxulumene...
Le khosi iqulathe uphuhliso lwethiyori kunye nophuhliso olusebenzayo lwe-Structural Masonry Walls. Yonke into enxulumene nemimiselo iya kuchazwa ngokweenkcukacha: Imigaqo yoYilo kunye noLwakhiwo lweZakhiwo kwiZakhiwo zeMasonry R-027 Umzekelo uya kuphuhliswa…
Uhlahlelo kunye noyilo lwezakhiwo ezikwaziyo ukumelana neenyikima: ngesoftware ye-CSI ETABS Injongo yesifundo kukubonelela umthathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko nezikwinqanaba eliphezulu lenkqubo yokwenza imodeli, uYilo lwezinto ze…
Uhlalutyo lwesakhiwo kunye noyilo-Inqanaba le-zero ukuya kwinqanaba eliphezulu. Injongo yekhosi kukubonelela umthathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko kunye neziphambili zeprogram yomzekelo, kungekhona nje ukufika kwi-Design yezinto zesakhiwo ...
Iikhonsepthi ezisisiseko zezakhiwo ezibambekayo, kusetyenziswa i-ETABS Injongo yesi sifundo kukubonelela umthathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko nezikwinqanaba eliphezulu lenkqubo yokwenziwa komfuziselo, kungekuphela nje ukufika kuYilo lweempawu zesakhiwo se…